ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ၏အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
၃၀ မတ် ၂၀၁၁ (၂၀၁၁-၀၃-၃၀)
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များ သည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး (၁၄)ခုအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ အစိုးရအဖွဲ့များကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးချုပ်များက ဦးဆောင်သည်။ အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဝန်ကြီးများ၊ ဥပဒေချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်တို့ ပါဝင်ကြသည်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ခန့်အပ်သည်။
ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး အပေါ်တွင်မူတည်၍ ဝန်ကြီးဦးရေ အနည်းအများ ကွာခြားသည်။ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဦးရေကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတတို့မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။
၁၉၈၈ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များအား တိုင်း (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီများမှ အုပ်ချုပ်သည်။ ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် တိုင်း (၇)တိုင်းကို တိုင်းဒေသကြီးဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၁ခုနှစ် မတ်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီများကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်များ ခေါ်ယူကာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ စတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁)ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ (၁၄)ဖွဲ့အား တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ်များ၏ နေရာတွင် ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဝန်ကြီးများ​နေရာတွင် ​ကောင်စီဝင်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁)ရက်နေ့တွင် အိမ်စောင့်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွင် အကြီးအမှူးဖြစ်သော ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး၏ ရှေ့နေချုပ် ဖြစ်သော ဥပဒေချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်တို့ ပါဝင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ်ရှိပါက ထိုမဲဆန္ဒနယ်မှ အနိုင်ရလာသော ကိုယ်စားလှယ်သည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ် အစိုးရအဖွဲ့တွင် အလိုအလျောက် ပါဝင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသ ပါရှိပါက ထို တိုင်း/ဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌသည်လည်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးအဖြစ် အလိုအလျောက် ပါဝင်သည်။
ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များသည် ပါဝင်သော ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးအရေအတွက်များ မတူညီကြသော်လည်း ဘုံအနေဖြင့် တူညီသော ဝန်ကြီးဌာနများလည်းရှိသည်။ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးဌာနများသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးဌာနများကို ခြုံငုံ၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းများလည်းရှိသည်။ ဥပမာ - ၂၀၁၆ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်း တာဝန်ယူခဲ့သော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည့် လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တို့လက်အောက်ရှိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကြီးကြပ်ရသည့် ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနသည် အစိုးရအဖွဲ့တိုင်းတွင် အမြဲတမ်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းသော ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သီးခြားဝန်ကြီး မထားရှိဘဲ ဝန်ကြီးချုပ်က တိုက်ရိုက်ကိုယ်တွယ်ခဲ့သည်များလည်းရှိသည်။ ဥပမာ - လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သီးခြားမဖွဲ့စည်းဘဲ ထိုအခန်းကဏ္ဍအား ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သော ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။
ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်သည် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှဖြစ်စေ၊ အခြေခံဥပဒေပါ အချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များမှဖြစ်စေ ရွေးချယ်ကာ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်သို့ အမည်စာရင်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကန့်ကွက်ရန် ခိုင်လုံသော အထောက်အထားမရှိပါက လွှတ်တော်မှ ငြင်းပယ်ခြင်းမရှိဘဲ သဘောတူရမည်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံတော်သမ္မတသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်သည် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးအတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံမှလည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးများအတွက် အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ၏ စာရင်းအား ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှလည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသ ဥက္ကဋ္ဌအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးအဖွဲ့များမှလည်းကောင်း အမည်စာရင်းတောင်းခံကာ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်သွင်းရသည်။ ထိုအမည်စာရင်းပါ ဝန်ကြီးများအား သမ္မတမှ ခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မတသည် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးအရေအတွက်၊ ဝန်ကြီးဌာနအရေအတွက်ကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်က ဥပဒေပြုနိုင်သော ကိစ္စရပ်များသို့ သက်ရောက်ပျံ့နှံ့သည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စု ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအား ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့် ကိစ္စရပ်များသို့လည်း သက်ရောက်ပျံ့နှံ့သည်။
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာတွင် ကူညီရန်တာဝန်ရှိသည်။တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ဥပဒေများနှင့် သော်လည်းကောင်း မဆန့်ကျင်စေဘဲ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အစိုးရသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စု၏ နှစ်စဉ်အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း အပေါ် အခြေပြုလျက် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရမည်။ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အစိုးရသည် မိမိတင်သွင်းသည့် တိုင်း ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကုန်ဆုံးမီ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းခြင်း မပြုနိုင်လျှင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော်က နောက်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ သာမန် အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုချက် ဘောင်အတွင်း သုံးစွဲခွင့် ရှိသည်။
တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အကြီးအမှူးသည် ရာထူးအလျောက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနများနှင့်အတူ ရုံးစိုက်လေ့ရှိသည်။ ထိုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးများတွင် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ တာဝန်ထမ်းဆောင်လေ့ရှိကြသည်။ အချို့​သော အစိုးရအဖွဲ့များတွင် (ဥပမာ- မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့) ဥပ​ဒေချုပ်ရုံးနှင့် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှာ သီးခြားတည်ရှိသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်
အမှတ်စဉ် အမည် ဒေသ
(၁) ဦးစိုးသိန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) ဦးမောင်ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(၉) ဦး​ဇော်မျိုးတင် ကယားပြည်နယ်
(၁၀) စောမြင့်ဦး ကရင်ပြည်နယ်
↑ ၄.၀ ၄.၁ "မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့"။
http://www.president-office.gov.mm/?q=cabinet/region-and-state-government Archived 11 March 2021 at the Wayback Machine.
http://www.president-office.gov.mm/?q=cabinet/region-and-state-government/id-10078 Archived 1 February 2021 at the Wayback Machine.
http://www.president-office.gov.mm/?q=cabinet/region-and-state-government/id-10118 Archived 1 February 2021 at the Wayback Machine.
http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2017/02/24/id-11814 Archived 1 February 2021 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး_အစိုးရအဖွဲ့များ&oldid=739328" မှ ရယူရန်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၂:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။